नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयको पुर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईद्वारा स्वागत, प्रधानमन्त्रीलाई भष्मासुरको संज्ञा दिँदै उनको विदाइ नै आजको मुख्य प्राथमिकता भएको तर्क – Tungoon
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयको पुर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईद्वारा स्वागत, प्रधानमन्त्रीलाई भष्मासुरको संज्ञा दिँदै उनको विदाइ नै आजको मुख्य प्राथमिकता भएको तर्क
काठमाडौं । चैत २१ गते
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संघीय परिषद्का अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वागत गर्नु भएको छ । आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफनै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने कांग्रेसको निर्णयको स्वागत गर्नु भएको हो ।
पुर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रतिपक्षीय धर्म निभाउने संकेत सराहनीय रहेको र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुलाई पनि कर्तव्य नभुल्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ । दलहरुका आ–आफ्ना एजेन्डा फरक भए पनि सबै भन्दामाथि देश, जनता र लोकतन्त्रको आवश्यकता हुने पुर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भष्मासुरको संज्ञा दिँदै उनको विदाइ नै आजको मुख्य प्राथमिकता भएको पुर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भनाई छ । उहाँल्े आ–आफ्ना दलका फरक एजेन्डा हुन्छन् तर ती सबै भन्दामाथि देश, जनता र लोकतन्त्रको आवश्यकता÷प्राथमिकता हुने जिकिर गर्नुभएको छ ।